पर्यटन बजार धराशयी , कोरोना नियन्त्रणमा बढी बजेट विनियोजन - मेयर शेर्मा - ParyatanBazar.com
पर्यटन बजार धराशयी , कोरोना नियन्त्रणमा बढी बजेट विनियोजन – मेयर शेर्मा
पर्यटन बजार१० श्रावण २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
साउन१०, झापा।कोरोना कहरका कारण बिश्वको अर्थतन्त्र, पर्यटन, शिक्षा लगायत कुराहरुमा सबैभन्दा धेरै असर पर्न गएको छ। अझै देशको दोस्रो सबभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र लगभग धराशायी भएको छ। सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको नेपालले वर्षको सुरुदेखि नै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण क्षति बेहोर्नुपरेको थियो।
यसै शिलशिलामा शिवसताक्षी नगरपालिकाका मेयर चन्द्र कुमार शेर्मासंग पर्यटन बजार डट कमले अबको दिनमा पर्यटनलाइ कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने कुराकानी गरेको छ।
‘कोरोनाको कहर’ मा देशको मुख्य कुन कुन कुरामा कहर बर्साएको छ?
कोरोनाले मुख्यत देशमा मात्र नभई बिश्वनै आक्रान्त बनिरहेको छ। अझै हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको हालत हाम्रै आखाअगाडी नै छ। देशमा सबैजसो मान्छे बोरोजगार भएको छन् अझै विदेशीएका नागरिक उतै अलपत्र छन् सरकारले चाहेर पनि उद्दार गर्न सकिरहेको छैन। लकडाउनले गर्दा मध्यम बर्गीय परिवार निम्न बर्गीय परिवारलाइ समेत आफ्नो दुइ छाक टार्न मुस्किल परिरहेको छ।
यस्तो अवस्थालाइ मध्यनजर गर्दै हाम्रो नगरपालिकाले बिभिन्न रुपबाट सहयोग गर्दै आइरहेको छ। भारतको सिमा नजिकै भएको हुनाले भारतमा अलपत्र परेका कतिपय नेपालि नागरिकहरुको उद्दार गरिरहेका छौ। हामीलाई दिनहुँ फोन आउँछ , म यस्तो अवस्थामा छु उद्दार गरियोस भनेर ! वहाँहरुको उद्दार र उपचारमा हामी दिनरात नभनी लागी परेका छौं।
नेपालमा कोरोना सुरुवात सुरुवात भएसंगै देश र जनताको अवस्था हेर्दा यो कहरबाट कोहि पनि अछुतो देख्दिन।
यस अबस्थामा पर्यटनको बिकासको लागि तपाइको नगरपालिकाले कस्तो कस्तो कार्य गर्दै छ ?
कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न नेपालको सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको र त्योभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पर्यटन लगभग ठप्प छ। आन्तरीक पर्यटकहरुको चहलपहल पनि शुन्यमा झरेको छ । हाम्रो मात्र नभई नेपाल सरकारको ध्यान पर्यटनमा भन्दा कोरोना नियन्त्रणमा ज्यादा छ । कतिपय पर्यटनको बजेट पनि अहिलेको सहजता हेरेर हामीले यहि माहामारीमा खर्च गरेका छौ। हामीले आफुले देखे सम्मको जनतालाई भोको बस्न दिएका छैनौ साथै बाहिर बाट आउने मान्छेहरुको लागि क्वारेन्टाइन, आर. डि. टी परिक्षण, पि.सी.आर परिक्षण जस्ता कार्यहरु नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ यसले गर्दा हामीले पर्यटनलाई एकदमै न्यून बजेट छुट्ट्याएका छौ।
पर्यटनको बजेट अर्को तिर खर्च गरेर पर्यटनलाइ एउटै स्तरमा कायम राख्न सकिन्छ त ?
हरेक बर्ष हामीले पर्यटनलाइ लक्षित गरेर ठुलो मात्रामा रकम छुट्याइ रहेको हुन्छौ यो बर्षमात्र हामीले पर्यटनलाइ अलिक ध्यान दीएको छैन। हाम्रो स्थानको आयश्रोत र बिकासको आधारमा हेर्ने हो भने कृषिपछिको दोश्रो ठुलो लगानी हामीले पर्यटनमा गरिरहेका छौ। भ्रमण बर्ष सन् २०२० मनाउने भनिरहदा हामीले पनि भ्रमण बर्षको भब्यताको साथ तयारी गरिरहेको थियौ। शिब सताक्षि धाम निर्माण गर्न मात्र हाम्रो नगरपालिकाले डेढ करोड भन्दा बढि खर्च गरको छ भने अन्य पार्कहरुको संरक्षण पनि गरिरहेकै छौ। पर्यटन हाम्रो देशको ठुलो आम्दामी भित्र्याउने र जिबनपर्यन्त चलिरहने उद्योग हो। हामीले यसलाई नजरअन्दाज गरेर हुन्न तर अहिलेको अवस्थामा पर्यटनक्षेत्र भन्दा महत्वपुर्ण मानिसको जिन्दगि हो त्यसैले पर्यटनको बजेट पनि हामीले यो क्षेत्रमा खर्च गर्न बाध्य भयौ। यसको मतलब यो होइन की हामीले पर्यटन क्षेत्रका लागि केही गर्दैनौं। अवश्य पनि गर्छौ कुरा यति हो की पहिलाको वर्ष भन्दा केही कम मात्र भएको हो। पछिको दिनहरुमा पर्यटन बिकासको लागी हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न पर्ने जिम्मेवारी बाट पछि हट्ने छैनौ।
यस क्षेत्रको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरु ?
झट्ट हेर्दा देशको १०० गन्तब्य भित्र नपरेपनि झापामा एकपटक घुम्नै पर्ने धेरै पर्यटकीय स्थानहरु छन् जसको आफ्नो छुट्टै बिशेषता र महत्व छन्। ति मध्ये पनि धेरै महत्वपुर्ण केहि स्थानहरु छन् जस्तै शिव सताक्षि धाम, दोमुखा, ऐतिहासिक चिल्लागढ , डुरामारि सिमसार र विभिन्न बालमैत्री पार्कहरु छन्। यी क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको राम्रै चाप हुने गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी यी क्षेत्रको प्रचारप्रसार मा लागेका छौ।
शिव सताक्षी नगरपालिकाको गौरवका योजनाहरु के के छन् ?
हाम्रो गौरवका योजना अन्तर्गत नगर पर्यटन विकास, दूधे रंगशाला, झिल झिले बसपार्क आदि रहेका छन् । करिब ४० करोडको लगानीमा हामीले यो रंगशाला निर्माण सुरु गरेका छौं। एक प्रदेश एक रंगशाला भन्ने अवधारणा का अनुसार दूधे मा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण कार्य सुरु भएको हो।यो रंगशाला ११ बिगाहा क्षेत्रफल मा फैलिएको छ। त्यस्तै झिलझिले बसपार्क लाई हामीले २ करोड बजेट छुट्याएर काम गर्दै छौँ । यसलाई हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडल बाट पनि अघि बढाउने योजना बनाएका छौं।अर्को नगर गौरवका योजनामा हाम्रो सडक पूर्वाधार विकास रहेको छ । जसको काम पनि अघि बढिरहेको छ ।